किम जोङ उन दक्षिण कोरियासँग हटलाइन खोल्न तयार, मेलमिलापका लागि यो कति महत्वपूर्ण ?
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले दक्षिण कोरियासँग मेलमिलापका लागि हटलाइन सेवा बहाल गर्ने तयारीमा भएको बताएको छ । उनको ताजा बयान उत्तर कोरियाको संसदको वार्षिक सत्रका बेला आएको छ । उत्तर कोरियाले यो वर्ष अगस्टमा अमेरिकासँग दक्षिण कोरियाले सैन्य अभ्यास गरेपछि यो हटलाइन बन्द गरेको थियो ।संसद सत्रका बेला किम जोङ– उनले अमेरिकामाथि आरोप लगाउँदै उसले कोरियाप्रतिच आफ्नो ‘शत्रुतापूर्ण नीति’ परिवर्तन नगरीकनै कुराकानीको प्रस्ताव राखेको बताए । दक्षिण कोरियाप्रति उदार तर अमे
किम जोङ उनको उपस्थितिमा 'हाइपरसोनिक मिसाइल'को परीक्षण
उत्तर कोरियाले हाइपरसोनिक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको छ। उक्त मिसाइलले एक हजार किलोमिटरको दुरी तय गरेको स्‍थानीय मिडियाले जनाएको छ। ब्यालेस्टिक मिसाइलभन्दा बढी दुरी तय गर्न सक्ने उक्त हाइपरसोनिक मिसाइल मंगलवार परीक्षण गरिएको थियो। दक्षिण कोरिया र जापानले भने उत्तर कोरियाले संदिग्ध ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको जनाएको थियो। उत्तर कोरियाले तेस्रोपटक…
पहिलो पोस्ट 8 दिन पहिले
एक सातामा उत्तर कोरियाले गर्यो दुई ओटा हाइपरसोनिक परीक्षण
उत्तर कोरियाले अर्को हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको पुष्टि गरेको छ । उत्तरले मंगलबार प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्र हाइपरोनिक भएको उत्तर कोरियाले पुष्टि गरेको हो । सो प्रहार एक हजार किलोमिटर टाढाको निसानामा पुगेको थियो । हाइपरसोनिक हतियारको गति आवाजभन्दा पाँच गुणा चाँडो हुन्छ ।नयाँ वर्षको अवसरमा नेता किम जोङ उनले प्योङयाङको प्रतिरक्षा तीव्र बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मंगलबारको परीक्षणको जापान र दक्षिण कोरिया दुबै देशले विरोध गरेका थिए । प्योङयाङले यसअघि पनि ५ जनवरीमा हाइपरसोनिक क्षेप्या
Ratopati 8 दिन पहिले
आगामी वर्ष आणविका हतियारको योजना विस्तार गर्ने उत्तर कोरियाली नेता किमको घोषणा
काठमाडौं । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले सन् २०२२ मा आणविक हतियार विस्तार गर्ने बताउनुभएको छ । ८ औं केन्द्रीय कमिटीको चौथो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता किमले आगामी दिनमा आणविक हतियारमा अमेरिका भन्दा शक्तिशाली हुने घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् । उहाँले दक्षिण कोरिया र अमेरिकासँगको कुटनीतिक संलग्नताहरुलाई पनि क्रमशः सुधार […]
Image Khabar 19 दिन पहिले
आणविक हतियार देखाउँदै किमले भने– दक्षिण कोरिया र अमेरिका शान्तिका बाधक
उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण नीति तथा दक्षिण कोरियाको सैन्य तयारीका कारण आफ्नो देशले हतियार विकसित गर्नुपरेको बताएका छन् । रक्षा विकास प्रदर्शनी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै किमले आत्मरक्षाका लागि सैन्य क्षमता बढाइरहेको र युद्ध गर्ने उद्देश्य नलिएको बताए भनी उत्तरको सरकारी समाचार संस्था केसीएनएले खबर दिएको छ । ‘अमेरिकाले आफू हामीप्रति शत्रुतापूर्ण नरहेको भन्दै आएको छ तर धरातलीय यथार्थ त्यसविपरीत छ,’ किमले बताए । ‘हाम्रा उत्तराधिकारीहरूका लागि भए पनि ...
दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले सैन्य अभ्यासको मूल्य चुकाउनुपर्ने उत्तर कोरियाको चेतावनी
किन बेस्सरी पड्किइन् किम जोङ उनकी बहिनी ?
अमेरिका र दक्षिण कोरियाका सेनाले संयुक्त युद्धाभ्यास गर्न लाग्दा उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनकी बहिनी यो जोङ कड्किएकी छन् । यस युद्धाभ्यासले कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव बढ्ने भन्दै उनले चेतावनी दिइन् । उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच पारस्परिक विश्वास बहालीको प्रयासलाई यसले झड्का दिने पनि उनले बताइन् । दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्ध हेर्ने जिम्मेवारी पाएकी यो जोङले भनिन्, ‘दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका सेनाबीच युद्धाभ्यासको निर्धारित कार्यक्रम अघि बढ्ने अप्रिय खबर सुनेकी छु । यसले दुई कोरियाबीचको तनाव पुनः भड्किन...
किम जोङ उन स्वस्थ छन् : दक्षिण कोरिया
उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन जीवित र स्वस्थ रहेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ । दक्षिण कोरियाका
किम जोङ उन चाँडै दक्षिण कोरिया आउनेछन् : राष्ट्रपति मुन
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाए इनले उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले चाँडै दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलको भ्रमण गर्ने बताएका छन्। गत सेप्टेम्बरमा प्योङयाङमा भएको दुवै नेताको दोस्रो शिखर बैठकका क्रममा उत्तर कोरियाली नेता किमले चाँडै दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्ने सहमति भएको थियो। तर भ्रमणको समयका बारेमा निर्णय भएको...
थाहा खबर आश्विन २०७५
दुई कोरियाबीच शुक्रबार शिखर वार्ता हुने भएको छ। उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाइ इनबीच भोलि सीमा क्षेत्रमा शिखर वार्ता तय भएको छ। सन् २००७ पछि दुई कोरियाका राष्ट्रप्रमुख पहिलो पटक भेट्न लागेका हो। भेटका लागि किम शुक्रबार बिहान स्थानीय समयअनुसार साढे ९ बजे सीमा क्षेत्रमा पुग्नेछन्। उनलाई त्यहाँ…